IFTIINKACUSUB.COM: Tirada qoyskiinna xisaab ma kusoo saari kartaa?
Waxa aan ka bartay Ilahay khayrbadan ha Siiyee Aqoon yahaan Siciid Xagaa,sida ugu fudud ee lagu soo saari karo tirada qoyskaaga xisaab ahaan,iyada oo waliba qaacidadaa xisaabta ah ee la raacaayo ay ka muuqan doonto ,tirada Inamada iyo tan hablahaba .
Waxa kaloo iyaguna raaca in Labadada waalid haddii mid nool yahay amaba uu dhintay aan qaacidadan kusoo saari doonto,waxa kaloo iyaduna raacda oo qaacidadan aad kusoo saari kartaa hadii aad tahay qof madi(kali ah) ama agoon ah.
Balse qacidadan waxaa inta badan fahmi kara ciddii waxbarashada Iskuulka soo martay ilaa heer dugsi dhexe,ama siyaabo kalaba xisabaha melahaas uga baratay,inkastoo iminka dadka badan koodu ay isticmalaan mishiinka Calcularorka,balse waa laga fiican yahay in mishiinkaasi ii aqoon kuu noqdo,waxa fiican in aad qalinka ku barato sida wax loo xisaabiyo loona kala jaro.
Qacidadani xisaab ahaan waxa ay maraysaa dhawr martabo ama noocyo kala gadisan ,kuwaasi oo kala ah ,isku dhufashi,isu-gayn ,kala jaris iyo lamid ama =
Ila soco qaabka aan xisaabta u dejinaayo kadibna adigu qooyskaaga ku tijaabi.
Tusaale ahaan:- saxiibka ama saxiibada ayaa waxa uu qoyskoodu ka kooban yahay sidan:-
laba waalid oo nool
intaasi waa aynu isla fahanay oo tira ahaan marka la isu geeyo waa qoys ka kooban Toban Ruux ,hadaba waxa aynu u baahanahay in qoyskaasi aynu xisaab ahaan kusoo saaro inta uu ka kooban yahay,wiilal,gabdho iyo waalid .
qaacidadu waatan ee yay kaa xoos bixin ,waxa aynu isticmaali doonaa ereyo aynu soo gaa-gaabsanay oo ka turjumaaya sida :-
Inamada ama Wiilasha oo aynu kusoo gaabsan doonno (IN)
Hablaha ama Gabdhaha oo aynu kusoo gaabsan doonno (HB)
Waalidka oo aynu kusoo gaabsan doonno (WL)
Erayga tirada waxa aynu usoo gaabsan doonnaa (TR)
Waatan qacidadi,waxa aynu rabnaa in qooys ka kooban 10 ruux 6 wiil iyo 2 gabdhood iyo labadii waalid aynu xisaab kusoo saarno.
TR IN 6 x 2=12+3=15x5=75+HB2=77x10=770+WL2=772 waxa aad haysataa 772 hadanan qaldanayn idinkuna ila eega.
waatan sirta ama qaacidadu:-
772- xisaabtan waxa loo isticmalayaa qaabka kala jarista waxana la kala jaraya 772 waxana laga jaraya 150 .
622 Xisaabtan 150 iyadu waa qaacido markasta aanad ka maarmayn. 622 =halkan waxa aad ka aragtaa in qoyskasi ka kooban yahay 6 wiil 2 hablood iyo laba waalid oo nool.
markasta lanbarka bidexda u xiga waa wiilasha kan dhexena gabdhaha kan midigtana waa waalidka.
Xaataa haddii waalidka mid dhintay xisaabta waa uu ka maqan yahay.haddii aad madi (kali)tahayna waa sidaa si leeg.
Qiso aan maanta la kulmay: Shimbiro cadaalad helay !
Waa goor kulayl ah waana magaalada Paris ee cariga dalka Faransiiska ,waxa aan kusoo daalay hawl iyo dan aan lahaa,waxa aan damcay in aan...
Shirkadda flydubai oo go'aan kasoo saartay dhacdadii Garoonka Cigaal Hargaysa.
Shirkadda flydubai ee duulimaadyada ku timaada garoonka Cigaal ee Hargeysa ayaa ka hadashay dhacdo jimcihii toddobaadkan ka dhacday mada...
Qiso yaableh: Madaxwaynahii hore ee Somaliya Xasan Sh Maxamuud oo sheegay in aanu waligii Xaaskiisa gacan u qaadin(dilin).
Iftiinkacusub.com: Inta badan Dumarka oo gacanta loo qaado ama la dilo maaha wax fiican,hadana iyada oo ay sidaasi tahay rag badan ayaa l...
Waxaynu rumaysan nahay, Haddii aan muslim nahay, in wax walba oo Alle kasoo hara ay jiri karaan muddo kooban. Dhirirka muddadaas inta uu ...
Qiso yaableh: Intaydaan i Toogan ii ogolaada in aan xaajo gutto(saxaroodo)
Iftiinkacusub.com: Waxa aynu wakhti aad u farabadan daawanaa ama aynu maqalnaa in magalada Muqdisho iyo nawaxigeeda lagu dilo (toogto)dh...
Anigu waxa aan ahay gabadh Midgaan ah !
Anigu Waxaan Ahay gabadh Midgaan ah? 1-""Anigu waxan ahay midgaan ,waayo waxaan leeyahay adkaysi"" Waxaan awoodaa adi...
Mufakir siyasadeed Cawil Cabdilaahi Xayd (Af-sarkaalleh) oo Hargaysa kusoo foolleh.
Iftiinkacusub.com: Hal-abuurnimada siyaasadu inta badan maaha wax la barto isla markaana Buug iyo Qalin loo qaato,balse waa wax loo dhash...
Xaaskaygu intaan Shanlada ugu maqnaa ayay Timahii gaabsatay!!
Mr. Xoogsade waa nin Xamaali ah oo Subax kaste u xoogsi taga Suuqa. Isaga iyo Xaaskiisa Raaliyo waxay ku noolyihin nolol hoose, waxayna N...
Xildhibanada golaha deegaanka iyo Baarlamaankaba ,intooda badan waxa aynu kala kulanay dib u dhac iyo dibin daabyo aan kow iyo labo to...
Vitimin D-ga oo Hoos u Dhiga Khatarta Qaybo ka mid...
Qof kula jooga lama xanto!!
Dhimashada odayasheenu ,waa Maktabad gubatay oo ka...